admin, Author at DuterteBlog
World / यी नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेतामाथि लाग्यो स्रोत नखुलेको ६१ करोड लुकाएको आरोप
July 18, 2019 / admin /
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनकुमार बस्नेतले स्रोत नखुलेको ६१ करोड रुपैयाँ लुकाएर राखेको तथ्य फेला पर्न आएको छ । काठमाडौंको महाबौद्धस्थित प्रणामी बचत…
World / चितवनमा सवारी दुर्घटना १४६ को मृत्यु
चितवन । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा सवारी दुर्घटनाका कारण १४६ ले ज्यान गुमाएका छन् । जिल्लामा भएका २९५ दुर्घटनामा परी उनीहरुको ज्यान गएको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २७१ दुर्घटनामा…
World / स्त्रीले बिहान सबेरै उठेर यी काम गर्दा चम्किन्छ भाग्य
तपाईं आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो होस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने ब्रह्म मुहूर्तमा ओछ्यान छाड्नुहोस् । यदी कोही व्यक्तिको कुण्डलीमा ग्रह सम्बन्धी कोही दोष भएमा भाग्यले साथ दिँदैन । कुण्डलीको दोषाबाट टाढा रहनका…
World / नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु : यस्ता छन् आजदेखि लागू हुने नयाँ नीति–नियम
१ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ आजबाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपणसहित…
World / मेरो छोराको एउटा फोटो खिचेर ल्याइदेउ मर्नुअघि छोराको फोटो भए पनि हेर्न मन छ
July 17, 2019 / admin /
’उज्यालो अनलाइन मा सन्जिता देवकोटाले लेखेकी छन् काठमाण्डौ ।मलाई त भेट्न कोही पनि आएको छैन, यसै बसिरहेको छु भन्छ, विदेशका जेलमा नेपालीलाई भेट्न कोही पनि जाँदैनन् हो,’ मनमाया मगरले छोराले…
World / अविवाहित महिला विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिस
एजेन्सी। एक नयाँ वैज्ञानिक अनुसन्धानले बालबच्चा नभएका अविवाहित महिलाहरु विश्वका सबैभन्दा खुसी मानिसमा पर्ने देखाएको छ । शीर्ष मनोविश्लेषकहरुको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। एक्लो जीवन बिताइरहेका र…
World / ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम बन्द – H Khabar
काठमाडौं : टेलिभिजन कार्यक्रम ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ बन्द भएको छ। राजधानीमा बुधबार आयोजित एक समारोहका बिच सञ्चालक मनोज पाण्डेले कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरे। एक वर्षअघि आजकै दिन सुरु भएको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’…
World / ८ मिनेटको दृश्यका लागि ७० करोड खर्च !
एजेन्सी– बाहुबली फिल्मका स्टार प्रभास र बलिउड नायिका श्रद्धा कपूर एउटै फिल्ममा देखिंदैछन् । भारतीय फिल्म ‘साहू’ मा यो जोडीको एकसाथ देखिँदैछन् । हिन्दी, तेलुगु र तामिल तीन भाषामा निर्माण…
World / कालै भएनि हुन्छ गोरै भएनी हुन्छ, यो देशमा फेरि एउटा बुद्ध पठाईदेउ !
काठमाडौ। भाईरल शब्द अहिले निकै चर्चित बनेको छ । साधारणतय समाजिक संजालमा जुन बिषय धेरै फैलन सफल हुन्छ, बढि खोजी हुन्छ, त्यसैलाई भाईरल भनिन्छ । पछिल्लो समय एउटा गीत त्यस्तै…
World / यी ६ राशिका लागि निकै राम्रो छ यो महिना, हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
नेपाली महिनाको ०१ गतेको एकाबिहानैदेखि मध्यरात्रीपछिसम्म जुनसुकै समयमा हुनसक्छ, सूर्यले राशि परिवर्तन गर्दा हाम्रो महिना पनि परिवर्तन हुन्छ । यस पटक हाम्रो सालको चौथो महिना प्रारम्भ भएको छ, सूर्यले पनि…